Mailaka tsy mandalo? Manampia firaketana SPF! | Martech Zone
Vao nifindra tany amin'ny mailaka an'ny orinasako aho Google Applications. Hatreto dia tena tianay ny fahalalahana omeny antsika. Talohan'ny nahatongavantsika tao amin'ny Google, dia tsy maintsy nametraka fangatahana fiovana izahay, fanampiana lisitra sns. Amin'izay isika dia afaka mitantana izany amin'ny alàlan'ny interface tsotra an'i Google.
Ny lesoka iray izay tsikaritray dia ny mailaka sasany avy tany aminay ny ny rafitra dia tsy mahavita azy us. Nahavita namaky ny torohevitr'i Google ho an'ny sasany aho Mpandefa mailaka marobe ary nanomboka niasa haingana. Manana mailaka mivoaka amin'ireo rindranasa 2 karakarainay izahay, fampiharana iray hafa natolotry ny olon-kafa ankoatra ny mpamatsy tolotra mailaka.
Ny eritreritro fotsiny dia hoe manakana tsy tapaka ny mailaka sasany i Google satria tsy afaka manamarina ny mpandefa amin'ny alàlan'ny Firaketana SPF. Raha atao fohifohy, ny SPF dia fomba iray anaovanao ny fisoratana anarana ny fonenanao, ny adiresy IP, sns izay andefasanao mailaka avy ao anaty rakitsoratra iray. Io dia ahafahan'ny ISP misy tadiavo ny rakipeo ary manamarina fa ilay mailaka dia avy amin'ny loharano mety.
Hevitra lehibe izany - ary tsy azoko antoka hoe maninona izy io tsy fomba mahazatra an'ny mpandefa mailaka marobe sy ny rafitra fanakanana spam. Mety hieritreritra ianao fa ny mpitan-tserasera rehetra dia tokony hanangana mpamosavy azy ho ao anaty lisitra izay loharano nandefasan'izy ireo mailaka. Tokony hampiasa sy hanamarina amin'ny SPF ny tsirairay! Ity misy lahatsoratra lalina momba ny SPF sy ny tombony, ny iray amin'izy ireo dia ny fahaizana miaro ny fonenanao tsy ho tafiditra anaty lisitra maintin'ny spam mody mba ho ianao.
Torohevitra: azonao atao hamarino ny firaketana SPF anao amin'ny 250ok.
Mba hanoratanao ny firaketana SPF anao dia mila mandeha lavitra fotsiny ianao Magicien SPF, fitaovana an-tserasera manampy anao hanoratra ny firaketana ho anao. Avy eo dia adikao fotsiny ary apetaho ao amin'ny fisoratana anarana Domain. Manavao ny firaketana an-tsoratra izahay rehefa manoratra ity lahatsoratra ity!
Manaraka ao amin'ny lisitra nataoko ny fikarohana Domain Keys. Nisy dingana lehibe nandrosoanay tamin'izahay fotsy miaraka amin'i AOL taona lasa. Mahatsapa aho fa tsy hitsahatra ny ady! Tena ratsy izany raha ny marina orinasa fanta-daza izay mila mitsambikina amin'ny hoop SPAM rehetra mbola!
Tags: 250okfanateranaInboxtratran'ny mpanararafitra politika mpandefaamin'ny spamsivana spamspffiraketana spf